idumela elihle kakhulu, ukuqashelwa ikhasimende nempumelelo ongenamkhawulo salon? Yiqiniso, kungenzeka! isinyathelo sokuqala kufanele kube kahle kwenziwe endleleni eya "ibhizinisi enhle." Indlela ukubiza yindawo yokuzilungisa? Izinketho zahlukahlukene kakhulu, nakuba kukhethwa abanikazi musa njalo ayeke efaneleka kakhulu. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba impumelelo ngokuphelele kufanele inake izici eziningi, okuyinto zichazwe ngokuningiliziwe esihlokweni.
I theory isici - ngesisekelo isinqumo kahle
Ukudala kanye ukukhanya igama ubuhle studio, yebo, tintfo letibaluleke kakhulu impumelelo yayo. Noma kunjalo, indima ebalulekile eyadlalwa isici ezincwadini umbuzo, ngoba ubusa ukuvumela ukugwema amaphutha futhi izimo iwubuphukuphuku esikhathini esizayo. Ezinye zalezi zidingo zihlanganisa:
Inani eliphelele, okusho exclusion pretentiousness.
Associativity, esiza ukwenza kucace ubunjalo amasevisi anikezwa emphakathini. Nakuba ukufunda amagama abantu kumele bakuqonde ukuthi lokhu ababhekana nakho embonini ubuhle.
Nokusebenza, endowing igama ukugqama ethize kanye yesimanjemanje. Indlela ukubiza yindawo yokuzilungisa? Kuyadingeka ukuba kuqedwe amazwi akusebenzi futhi neologisms.
Ukusebenza ivumela ukuthi igama ukusebenza ngokusebenzisa ukuqonda kwakhe ngokuphelele amakhasimende.
Kalula lenze ukuba amagama aphinyiselwe, okuyinto eqala inhlanganisela ngempumelelo izingxenye ezintathu: efundeka, eguquguqukayo (ikhono ziyahlukahluka ngokuya lolimi, isb enalokho kuthambekela) ubuhle futhi umsindo (encimfelwayo ngaphandle semali nongwaqa sibilant iyunifomu interleaving nabo onkamisa).
I-non-triviality, banality okulingana wokuqeda kwetinhlavu amagama, ngoba engakwazi ukwenza ngisho izici standard kakhulu (ezifana ukukhangisa kanye ehlukile).
Ukukwazi ukufunda nokubhala, ukukhonza isici ongenambangi. Ukukhishwa lwamagama non-standard, uma kungenziwa ziqondakala emphakathini njengesakhamuzi esihlelekile iphutha kolunye ulimi.
Indlela ukubiza yindawo yokuzilungisa? Ukunquma ukuma
Namuhla izivakashi ubuhle studios olukhuni ikakhulukazi, yingakho ekuvulweni salon kufanele ucabangele zonke izici nemininingwane emincane. Kwabe sekuvela ukuthi, inhloko-dolobha yaseRussia seliphindeke izikhathi ezingaphezu kuka-600 izikhungo kulendawo emazingeni ahlukahlukene. Nobuhle Class "okunethezeka", kodwa futhi ezincane maqondana isikali yokulandelana kwayo ngokohlu kungaba ozibongayo ezihlukahlukene amagama, kodwa inkinga wukuthi akusiyo kuwusizo umsindo wabo njalo. Ngaphezu kwalokho, imithetho oshiwo ngenhla wabanikazi izikhungo zibuswa umkhakha ubuhle akuvamile kakhulu, okuyinto Kuyadumaza.
Kumele kukhunjulwe ukuthi igama - kuba ingxenye enkulu umfanekiso izikhungo, okuyinto yakha abanekhono ukukhangisa isithombe, okuyinto enquma impumelelo isakhiwo ukukhuthazwa emakethe. Indlela ukubiza yindawo yokuzilungisa? Uhlu lwamagama aziwa isitayela emhlabeni namuhla, ocebile kakhulu. Nokho, zokwandisa nokuthuthukisa ikhwalithi - kuhlukile ngokuphelele, ngakho kuhle ukuzama ukufeza nomphumela ngempumelelo. Ngakho, into yokuqala ngesisekelo igama studio kutfola orientation yayo ngokuhambisana imvelo nezindawo ezimaphakathi nezwe. Nazi izindlela ethandwa kakhulu maqondana kumiswa amagama beauty salon.
Indlela ukubiza salon ubuhle ku Feng Shui?
Kumiswa igama ubuhle studio nesitayela ngokuvumelana Isici siqu ukuxhumana amandla ne energy zomhlaba - isinqumo bafundile, ngoba ngenxa yalesi isayensi olusungulwe hhayi kuphela amancane, kodwa ibhizinisi bawenza ngempumelelo kanye nemizi yonke Kwakhiwa. Yingakho fashion feng shui efanele namuhla, nakuba indlela sekukhona ekhulwini le-19.
Central "chip" kwetinhlavu amagama ubuhle feng shui ukuze isize umkhaya, abangane noma abathandekayo abafisa umnikazi lesikhungo kuphela ezinhle nenhlalakahle. Abakhethiwe ukunikela isihloko, uholwe izwi inhliziyo yakho. Ngakho igama ligcwele umuzwa ukukhanya futhi ekugcineni ukuletha isikhungo kanye umnikazi walo impumelelo esingenakuqhathaniswa nokuduma emphakathini ngokusebenzisa amandla omuhle kothandekayo. Igama gumbi, owawungumnyaka mantra uhlobo kufanele kube elula ngokuya imphimiso osobala incazelo - bese amandla omuhle ngeke lenze umsebenzi walo.
amagama Female ukuheha ukukhanya namandla
Indlela ukubiza yindawo yokuzilungisa? Kusukela esahlukweni esedlule ilandela umqondo yokuqala ukwakha igama studio, ithuthukiswe ngokuhambisana namazinga amabutho amandla. Ngokuvamile, abanikazi bamabhizinisi siyibukele phansi ezingaba ukukhangisa lwamagama zabesifazane, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya, ngoba ucansi fair kudala ukugeleza Amazing amandla, kuba nomphumela omuhle izici ezihlukahlukene zokuphila. Ngakho, uma uthumela lesi amandla ukuze ubuhle studio ngokukubeka ngegama lomuntu wesifazane, isikhungo, cishe, uzobe ephelezelwa impumelelo nokuduma omphakathi, okuyinto umgomo oyinhloko we imisebenzi yayo.
Ngokwemvelo, ukuthi isikhathi esiningi siye sitholakale indima amagama gumbi ukuhlangabezana amagama angaphandle zesifazane, ezifana Christie, uKathleen Adele, uJosephine, Julie nabanye. Noma kunjalo, kukhona amacala isicelo lwamagama Russian: Olga, Hope, Love, nokunye. Indlela igama ubuhle salon ibhizinisi abasha lady ULyudmila? Yiqiniso, igama lakhe! Futhi akukho lutho olungalungile - uma nje umphefumulo bajabula!
Mythology nezincwadi - i choice omuhle
Ingabe wena uthanda igama bangaphezi uhlamvu oluthile wombhalo okukanye uhlamvu wasenganekwaneni? Khona-ke ngaphandle kokungabaza kufanele correlate ngayo abanikwe esigabeni sokuqala imithetho kanye nokufaneleka abanike ubuhle salon entsha! Iqiniso lokuthi igama kuzokwenza emphakathini eziningi izinhlangano ukuthi unganakile udonsa ngayo isithakazelo sabo. Lokhu kumelwe kusebenze njengesibonakaliso Yiqiniso emangalisayo ukukhangisa, futhi ngenxa yalokho, ukwandisa isibalo amakhasimende.
Kubalulekile ukuthi igama ukuhlanganisa we izibalo wombhalo okukanye basezinganekwaneni kufanele bacabangele eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ekusebenziseni impahla lucebe, okuyinto kufihlwe. Lokho iphelelwe amagama endaweni ezifana "UAdamu NoEva", "The Little Mermaid," "Beauty and the Beast," "u-Abela" nokunye. Ungabonisa kanjani shayela yindawo yokuzilungisa? Kufanele kukhunjulwe ukuthi Umbala ngokomzwelo kwegama akhethiwe kumele ibe yangempela. Ngakho, umfanekiso badabuka kakhulu we Mermaid Little emisebenzini Andersen sika cishe ukukhonza njengephayona isici nonomusa. salon amakhasimende ngempela bakhumbule indlela isikhulu handsome aya kwenye wesifazane. Kodwa igama elithi "u-Aphrodite", "psyche" noma "UHelen Elihle" elizoba ongakhetha zaphumelela ngoba baphathe wezinto eziningi kangaka ezinhle nesisa!
amazwi Foreign - isixazululo yesimanje
Namuhla, abanikazi UBUHLE entsha ngokuya uncamela ukusetshenziswa kwamagama angaphandle amagama izakhiwo. Nokho, "Ubuhle", "barber", "kuafyur" kule nguqulo kuzwakala "Beauty", "barber", "Izinwele" futhi ngokuvamile kubangela ongaziwa ukuphendula umphakathi, lo mkhuba kuvamile emadolobheni amakhulu. Kufanele kuqashelwe ukuthi sithathe okulingana angaphandle imigomo Russian ngokucophelela okukhulu, ngoba amathuba lasetulu kakhulu amaphutha lucebe okwagcina kungaba ukwehluleka enkulu ubuhle studio. Yingakho abanikazi nokucwala entsha ngokuvamile ukugwema lesi simo ngokungeza igama elithi yesibili: «Nail-Studio», «Nail-Beauty" nokunye okunjalo.
Ngo obumba igama umnikazi ngamunye izikhungo zebhizinisi Kumelwe ukhumbule omunye bendabuko imithetho nokukhangisa: Noma ngabe yikuphi akunakwenzeka ukuphoqelela izivakashi ukuzibuza. Ngakho-ke, lapho olwazini olungaphelele ngale ndaba, kodwa yikhona sikhuthalela kakhulu uqedela isithombe ukusikisela zayo angaphandle kufanele baphenduke ochwepheshe emkhakheni isiNgisi (noma ezinye izilimi). Phakathi ukwehluleka, ngisho igama ezihlekisayo, ungakhetha "Indlovu yomugqa", okuyinto uhumusha njengoba "Ukukhanya indlovu" noma "indlovu Easy" noma "Munlayn" ( "Moonlight Line"), okuyinto ochwepheshe musa ukuqonda isiNgisi. Kuyinto ayinangqondo futhi iwubuphukuphuku, akunjalo?
Geography njengenhlangano isivakashi endaweni ahlonishwe Nobuhle
Omunye umkhuba kuvamile impela namuhla, kuba kuchumana phakatsi ubuhle nge indawo yayo eklanywe njengomumo womhlaba noma studio akunika umbala ezweni bahluke. Esimweni sokuqala, yonke into icacile: "Ubuhle mayelana nezembatho zempi", "ubuhle studio ku Petrovka" eyiziqu ulwazi ukuthi ukhulume mayelana udumo saloon, inquma ukuthandwa endaweni ethize noma idolobha. Kufanele kuqashelwe ukuthi leli thuluzi ukuheha abathengi isebenza kuphela maqondana abakhileyo zomdabu sendawo ethile, ngamakhasimende kahle endaweni abafanele. Kodwa maqondana labantu non-ohlala ngokuhlukumeza okunamandla wokukhangisa we kubhekwe ukumaketha hambisa, ngeshwa, ilingana no-zero.
Esimeni sesibili, enika kulesakhiwo flavour angaphandle kuyafaneleka kuphela uma ilungiselelo egcwele ingaphakathi isitayela esithile. Ngokwesibonelo, ngokuvamile abanikazi ubuhle salon ukhethe umoya empumalanga noma isiGreki maqondana studio wakhe. Ngakho, igama elifanelekayo, yebo, kuthatha isikhundla ngokuwina.
Ukwenza Izinto Zibe Lula noma igama eziyinkimbinkimbi?
Indlela ukubiza salon ubuhle ukuheha impumelelo ngenzalo ikhasimende? Ukuze uqambe winner isitayela studio umsindo, kufanele ucabangele yonke imininingwane, kuhlanganise eyinkimbinkimbi yokulandelana kwayo ngokohlu. Kukhona izinketho ezimbili kukhona. Esimweni sokuqala, igama kulingane okudayiswayo, kuzwakala esifushane futhi ecacile, isibonelo, 'Ukuthandeka', "isitayela", "Nesisa," 'Ukuthandeka' nokunye. Amagama umfanekiso lesikhungo kanye ukwaba ke abe luhlaza ezithile. I izincazelo "Beauty Center", "Umgudu Nobuhle" ukuchaza ngokucacile isimo isakhiwo, okuyinto kwelinye umongo, udlala indima plus elikhulu, ngoba wonke umqondo ilula, kodwa kulesi esinye udonsa lokususa ngokugqamile, njengomphakathi wezwe, njengoba umthetho, ulahleke iqoqo izihloko iyunifomu . Nokho, ukwenza izinto zibe lula uma ziqhathaniswa nobunzima konke okusemandleni nokuba yinkimbinkimbi ubukeka kunenzuzo, kuba izinto ezivusa ugqozi.
Kodwa emigwaqweni emadolobheni ahlukahlukene ungakwazi ngokuvamile ukuthola ubuhle salon anamagama afana ne- "Ukukhanya Khanyisa", "Unguye Umninimuzi UMargarita", "okuthile okuhlukile" nokunye. Pretentiousness yamagama anjalo kunciphisa kuphela ikhono yokukhangisa, ngoba ziqondakala umphakathi kunzima kakhulu, okuvame ukuholela ukwehla ngomfanekiso izikhungo, futhi kungakho inzuzo.
Kukhona inani Amazing of izindlela ukubiza salon ubuhle ukuze ahehe inombolo enkulu amakhasimende Nokho, lo msebenzi ngokuvamile kubangela ubunzima obuthile ngokuba abanikazi bamabhizinisi. Ngakho-ke akuyona kwetfulwe ngemalengiso kulokhu kuzosiza professional noma ezimele yocwaningo lwemakethe.
Ngeshwa, kuphela nje amanye amazwe ambalwa, kukhona umsebenzi ezifana wezengqondo emkhakheni wokukhangisa, ngakho uma kungenzeka, kufanele ubheke ukuma jikelele master. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngokuziphatha ukusungula ikhomishana ezimele ezophenya ngokoqobo ngoba noma yimuphi umnikazi kungaba ethakazelisa kakhulu kunaleyo on ezingeni engqondo ngokushesha ngemva lo mbono. Kuze kube yimanje, ukwakheka igama studio kuyadingeka ngenze ama-interview nabantu okungenani abayishumi mayelana izinhlangano zabo enegama yasungulwa. Le nqubo ngeke abone amaphutha okungenani ezinkulu, uma ikhona, futhi yebo, ukuqinisekisa ukucabanga umnikazi ubuhle salon uma kungekho zamehlo.